TAMAANDHO NOOCYO AH "RAPUNZEL": SHARAXAAD, SAWIR, DABEECADO, YAANYO SII KORDHAYA - NOOCYO YAANYO
Tamaandho badan ayaa qiimeeyay beeralayda qiimaha nafaqada iyo waxsoosaar sare. Sannado badan, dadka jilicsan ayaa ku dhibtooday inay soo saaraan noocyo khaas ah oo tamaandho ah, taas oo lahaan lahayd qiyaas yar, taasoo si sahlan u fududeyn doonta gaadiidkooda iyo ururinta, iyo sidoo kale si sahlan koray guriga, iyadoo la ilaalinayo sifooyinka organoleptic ee qaraabadooda waaweyn. Dhammaadka, dhirbaaxadu waxay ku guulaysteen - natiijada shaqadoodu ahayd yaanyada cherry, mid ka mid ah noocyada taas oo ah "Rapunzel". Maqaalkani waxaad ka heli doontaa macluumaadka ku saabsan yaanyo "Rapunzel", sharaxaadda noocyada kala duwan, iyo sidoo kale barashada sifooyinka beeritaanka iyo daryeelidda iyaga.
Kala duwanaantani waxay magaceeda u heshay sababtoo ah awoodda ay u leedahay inay muddo dheer sameyso, bur burinta hoos u dhiganta miraha oo u eg midabada geesinimada ee hibada caanka ah ee Walaalaha Grimm Rapunzel. Burush kasta wuxuu ka kooban yahay qiyaastii 40 si sax ah loogu diyaariyey miraha caadiga ah ee midabkiisu yar yahay. Miisaanka caadiga ah ee tamaandhada kala duwan ee noocyadaas aan ka badnayn 30 g. Dhuxulku waxay la mid yihiin kuwa noocyo kale ah iyo bacriminta yaanyada cherry.
Ma taqaanaa? Muddo dheer, yaanyada ayaa loo tixgeliyey alaab aan la dabooli karin, marmarka qaarkoodna xitaa burburin bini'aadamka. Bannaanka Yurub Yurub waxay u koraan sidii dhirta qalaad ee qurxoon.
Kala duwanaantan ayaa markii hore lagu soo bandhigay mid ka mid ah bandhigyada beeraha ee lagu qabtay Maraykanka sannadkii 2014. Waxa soo saaray shirkadda Ingiriisiga "FloraNova". Da 'yar yar ee kala duwan ee yaanyo cherry this ka dhigtaa adag tahay in la gaaro si ay u iibsadaan aagahayaga, maaddaama ay miraha ayan si fudud u bilaabin in si weyn loogu soo galo wadanka. Warshadu waxay gaartaa dhererkeedu yahay 180-240 cm. Kala duwanaantu waa mid aan caddayn, taas oo muujinaysa awoodda ay u leedahay kobaca aan xadidnayn. Noocyada noocan oo kale ah yaanyada, asaasiga ugu weyn wuxuu soo saari karaa illaa 40-50 burush oo dalagga sanadkiiba, dhammaan kuwa yar yarna waxaa lagu talinayaa in laga saaro.
Ma taqaanaa? Tamaandhada ugu weyn ee adduunka ayaa lagu koray gobolka Mareykanka ee Wisconsin. Miisaankeedu wuxuu ahaa 2.9 kg.
Wakhtiga Baasaaboorka waa muddo 75-80 maalmood ah. Waxaa lagu talinayaa in la beero noocyada kala duwan ee tamaandhada ka dib markii hanjabaadda dhaxan la dhaafay, oo leh bilowga guga.
Aragtaan weyn uuna sii kordhaya weelashaSi kastaba ha noqotee, waa adag tahay in la qiyaaso in noocyada kala duwan ee noocyo badan lagu kori karo balakoonnada. Guud ahaan, tiknoolajiga beeritaanka yaanyadani ma aha wax ka duwan kuwa ka mid ah kuwa ay ka weyn yihiin.
Baro waxa yaanyada cherry ku fiican yihiin iyo sida loo sameeyo macaanka ee yaanyada yaryar.
Xulashada iyo diyaarinta abuurka
Seeds for breeding noocyo kala duwan ee yaanyada oo aan kiis kasta laguma qaadi karo gacanta, taas waxaa sabab u ah horey loogu soo sheegnay kor, ee yaraanta noocyada kala duwan ee aagga.
Sidaa darteed, waa inaad si toos ah uga dalbataa dukaamada khaaska ah ama internetka.
Isla markiiba ka hor geedi socodka, miraha waa in lagu qabtaa biyaha diirran dhawr saacadood, ka dibna lagu daaweeyaa xal daciif ah oo ah Kansar dhalaanka si looga ilaaliyo cudurada iyo cayayaanka.
Beerista iyo daryeelidda geedo
Waqtiga ugu wanaagsan ee beerto waxay socotaa bartamaha bisha Maarso illaa horraantii Abriil. Seeds waxaa lagu beeray kareemo gacmeed, kaas oo lagu sameeyay qalin qori, weelasha lagu shubo. Marka xigta, waxaad u baahan tahay inaad ku daboosho abuurka beeraha leh qulqul (ilaa 4 mm) lakabka ciidda bacrin ah iyo ku shub badan biyo diirran oo ka badan abuurka.
Waa lagama maarmaan in la abuuro shuruudaha wanaagsan ee biqilka ee geedo, kaas oo ka kooban ilaalinta heerkulka anshaxa ee aagga + 25-28 ° C iyo bixinta saacadaha saacadaha 10-12 saacadood. Marka la abuuro xaaladahan, caleemaha ugu horeeya waa inay muuqdaan 5-7 maalmood kadib.
Waa muhiim! Ka dib muuqaalka caleemaha ugu horreeya, heerkulka waa in la yareeyo calaamadda + 20 ° S, waa in aan la yareeynin xittaa, waxay u horseedi kartaa in lagu keydiyo dhirta dhalinyarada.
Geedo u baahan yihiin in la waraabiyo sida ciidda ku qalaji, laakiin mid ka mid ah waa in aanay noqon mid aad u qiiro leh waraabiyo, sababtoo ah tiro badan oo qoyaan ah ayaa si ula kac ah u waxyeeleyn karaan nidaamka xididka of geedaha, taas oo ugu dambeyntii keenaysaa dhimashada dhirta.
Xilliga ugu fiicnaanta qaadashada waxaa loo tixgelin karaa xilliga geedi-socodkaagu uu yeelan doono 3-4 baxo on seedling kasta. Si loo qaado, waxaa lagama maarmaan ah in la diyaariyo weelasha horay loo buuxiyo mugga 250-500 ml, kaas oo ah in laga buuxiyo ciid wanaagsan.
Xaaladdan oo kale, geedo waa in lagu hayaa inta lagu jiro mudada oo dhan ilaa wakhtiga loo dego ee loogu talagalay. Isla mar ahaantaana, waxaa lagama maarmaan ah in la waraabiyo dhirta si joogto ah, laakiin mar labaad waa inaadan ka badin-yaanyo yaryar - taasi waxay keeni kartaa dhimashadooda.
Muddadan, taangiyada leh geedo hore ayaa loo qaadi karaa balakoonka, laakiin kaliya haddii heerkulka hawadu uu horey u gaadho + 16-18 ° S. Laakiin xitaa haddii ay weli tahay hargab ku filan dibedda, usbuuc ka hor intaan la wareegin, waxaad u baahan doontaa inaad bilowdo inaad ku qaadato hawada furan si aad ujoogto.
Sidoo kale akhri wax ku saabsan dhirta sii kordhaysa - geedo yaanyo.
Yaanyada beerto ee dhul furan
Qalabaynta dhulalka furan waa in la sameeyaa ugu dambeyn qeybta labaad ee bisha Juun. Daaweynta dambe ayaa dib u dhigaysa koritaanka dhirta ee dhirta, taas oo natiijada ka dhalan karta natiijada, taas oo aad ka heli doonto beerihii saboolka ah ama aadan arki doonin.
Goob si aad u koriso
Dhammaan wixii dhul ah ama dheri ka buuxsamaya ciidda waxay u adeegi karaan meel lagu beerayo. Shuruudda kaliya ee dheriga waa qoto dheer ku filan.
Wixii koritaanka caadiga ah iyo horumarinta noocyada kala duwan ee tamaandhada, maalin aad u badan oo iftiin ah ayaa loo baahan yahay, sidaa daraadeed waxaa lagula talinayaa in lagu beero goobo wanaagsan. Yaanyadani, sababtoo ah kobcintiisa aan xadidnayn, si fiican ugama noolaan karto meelaha u nugul dabaysha xad-dhaafka ah: asliga ugu muhiimsan, oo horeyba u haysta miisaan culus oo miraha ah, wuxuu jebin karaa saameynta hawada hawada.
Si loo beero noocyada kala duwan ee yaanyada waa lagama maarmaanka u ah dheryaha kala duwan, ama haddii beeritaanka lagu fuliyo dhulka furan ama awooda dheer, masaafada u dhexeysa duurka shakhsi ahaan waa inay ahaataa ugu yaraan 40-50 cm.
Xirmooyinka ay tahay in la beerto ayaa la samayn doonaa ugu yaraan 10 cm qoto dheer, waxaa lagula talinayaa inaad isku daydo inaadan waxyeeleynin nidaamka asaasiga ah inta lagu guda jiro geedo. Qeybta hoose ee godad kasta waa in lagu daraa isku dar ah oo ka kooban ciid, peat iyo bacrin bacrimin ah ee saamiga 1: 1: 2. Next agab kasta oo dhalinyaro ah ayaa lagu talinayaa in la rakibo nasiib darro iyo nasiib darro, sida dhirta ay dabiiciga ah ay u leedahay koritaanka si caddaalad ah. Saaxiibbo fiican ee beerista yaanyadani waa digitalis, basil, kariimka, karootada, marigold, kalluunka liinta iyo dhirta.
Baahida noocaan ah dharka caadiga ahkuwaas oo u baahan in la sameeyo waqtiyada kala duwan ee labadii toddobaadba mar. Bacriminta waa in ay noqotaa bacriminta organic iyo macdanta. Bacriminta dabiiciga ah ayaa ugu fiican ee la isku daro slurry ama digada cusub ee saamiga 1:10, iyo tan macdanta ayaa ugu fiican in la isticmaalo kakam khaas ah, kuwaas oo loo keeno xaalad diyaargarow si loogu isticmaalo ku saleysan tilmaamaha ku lifaaqan.
Yaanyadaas waa in ay noqdaan kuwo joogto ah pasynkovat, oo keliya oo kaliya 1-2aad ee afkoda oo ay ka saareen caleemaha dhalinyarada, sababta oo ah waxay kaliya hoos u dhigi doonaan koritaanka dhirta ee ugu weyn ee afkoda, iyada oo aan la dhicin wax faa'iido ah oo aan la siin xitaa dhalidda ugu yar. Maadaama ay astaamuhu koraan, waxaa lagama maarmaan ah in si taxadar leh loogu hagaajiyo taageerada si looga hortago waxyeelladooda. Miro sida Bisaylkiisa waa in si joogto ah loo ururiyaa, taas oo u oggolaan doonta koritaanka iyo horumarinta miraha cusub. Sidaa darteed, haddii aad dhirta ku ilaaliso raaxo leh oo ku haboon xaaladaha fruiting, waxaad soo ururin kartaa 3-4 dalag hal sano ah.
Waa muhiim! Inta lagu jiro xilliga beerashada oo dhan, waxaa lagama maarmaan ah in la qaado dhowr faashooyin ka hortag ah oo ay ka caawiyaan xalalka cayayaanka ee kala duwan, tusaale ahaan, isku dar ah Bordeaux, iyo sidoo kale qalabka joogtada ah ee gacan ka helaya qaar ka mid ah fungicide, tusaale ahaan, xalalka potassium.
Qaababka sii kordhaya balakoonka
Sababtoo ah koboc weyn, noocyada kala duwan ee tamaandhadu maaha kuwo ku habboon xaaladaha guryaha, laakiin haddii aad weli rabto inaad korto xaaladahan, dheriga ku rid dhulka, kaas oo u oggolaan doona in dhirta ay u korodho awoodeeda buuxda ayna u korodho ilaa heerka ugu sareeya .
Haddii ay dhacdo in daboolka balakoonkaagu uu yaryahay, waxaad ku kori kartaa yaanyadaas weelasha ah ee weelasha laga xiro geesaha daaqadaha. Si kastaba ha noqotee, si aad u raaxaysato midhaha miraha, sare ee baadiyaha sii kordhaya ee habkan waxay u baahan doontaa in si joogto ah loo xiro ilaa uu gaaro cabbirka aad u baahan tahay.
Si adag u xakamee xaddiga qoyaanka ee dhererka leh dhirta dhirta leh maalmaha roobka, iyo haddii loo baahdo, daboolo ciidda iyaga oo leh dabool caag ah ama bacaha balaastigga ah, sababtoo ah xad dhaafka qoyaanka waxay keeni kartaa dhaawac xagga nidaamka xididka geedka, taas oo ugu dambeyntii horseedi doonta. jaahwareer
Waxaan rajeyneynaa in hadda ay kuu fududaan doonto inaad go'aan ka gaarto haddii aad u baahan tahay inaad kobciso yaanyada Rapunzel ka dib markaad akhrisid sharraxaadda kala duwan iyo astaamaha beerahooda. Xusuusnow in miraha kala duwan ay weli yihiin kuwo aad u adag in laga helo degaankayaga, laakiin haddii aad rabto inaad si taxaddar leh u fiirsato badanaa isla markaana waqti isku mid ah oo la mid ah noocyada kala duwan ee noocyada kala duwan ee yaanyada cherry: "Supersvit", "Apricot Dreams" "Bead" iyo "Cherry Black".